hot Archives | XYZ NEWS
ကားဟာ အင်ဂျင်စက်နှိုးထားတဲ့ အနေအထားလို့ သိရပြီး အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် Artyom Dorogov အမည်ရ အမျိုးသားနဲ့အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်တင်းနှောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ရုရှနိုင်ငံ Zemetchino အမည်ရ ရွာကလေးမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အသက်(၁၅)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Alena Styukhina …
December 5, 2019 By Admin hot
အမေရိကန်၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနေတဲ့ အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ်ရှိ Heidy Pandora လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကတော့ ချမ်းသာတဲ့အိမ်ထောင်ရှင်ယောကျာ်းတွေနဲ့ ခရီးထွက်တာ (၃)နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ(၂၀)ကျော်ကို လည်း လည်ပတ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ လက်ရှိမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး “full-time traveller”အချိန်ပြည့် …
ကောင်မလေးတစ်ယောက် စိတ်ပါနေပြီဆုုိတာ သိနိုင်တဲ့အချက် ( ၁၀ ) ချက်
November 29, 2019 By Editorahot
မီးသင်္ဂြိုဟ်ပြီး ရ လအကြာ သေဆုံးသူ ပြန်ရောက်လာတဲ့သူအကြောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားတဦး သေဆုံးသွားလို့ မီးသင်္ဂြိုဟ်ပြီး ရ လအကြာ အိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ မိသားစုဝင်တွေက အကြီးအကျယ် အံ့သြသွားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စာခွန်စာခီဝါ အသက် ၄၄ နှစ်က အစာအိမ်ရောဂါနဲ့ သေဆုံးပြီး သူ့ရဲ့အလောင်းကိုတောင် တွေ့ခဲ့ကြတာလို့ သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေက …
November 26, 2019 By Editorahot
အရက်မူးပြီး ရထားသံလမ်းပေါ် ရောက်နေသည့် အမျိုးသမီးကို ကယ်တင် (ရုပ်သံ)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့စွန်က ဘူတာရုံတခုမှာ သံလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးကို ရထားမရောက်မီ စက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာ ဆွဲတင် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စီစီတီဗွီ လုံခြုံရေးကင်မရာက ရိုက်ကူးထားတဲ့ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ သြစတြေးလျ ဗစ်တိုးရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးဟာ …
November 25, 2019 By Editorahot
ခရိုင်းမီးယားတွင် ရုရှားက ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်တပ်ခွဲသစ် ချထား
ရုရှားအစိုးရဟာ S400 မြေပြင်က ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည် တပ်ခွဲအသစ်ကို ခရိုင်းမီးယား ဒေသမှာ စနေနေ့ကစပြီး တပ်ချလိုက်တယ်လို့ ရုရှား သတင်းဌာနတွေက အစီရင်ခံပါတယ်။ ခရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ်မှာ စစ်ရေးတင်းမာမှု တိုးနေချိန်မှာ ခုလို တပ်ချလိုက်တာပါ။ ရုရှားဟာ ခရိုင်းမီးယားဒေသကို …
ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဖိုး မတတ်နိုင်၍ ၂ ယောက်ဆင့်ပြီး သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ ကလေး ၂ ဦးရုပ်သံ ရေပန်းစား
We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m — Pillsbury …
November 21, 2019 By Editorahot
ဓားပြနှင့် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့် အာဂဆိုင်ရှင်သားအမိ (ရုပ်သံ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ စတိုးဆိုင်တခုမှာ လိုင်စင်မဲ့ သေနတ်ကိုင် ဓားပြတဦးနဲ့ သားအမိ ၂ ဦး အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ရုပ်သံထဲမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေက အုတ်ကလာဟိုးမားပြည်နယ်မှာ ဝယ်သူမရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်ထဲ ဓားပြတဦး ဝင်လာပြီး …
ကလေးငယ်တဦး၏ နေ့လယ်စာ ထမင်းဘူးထဲမှ အဆိပ်ပြင်းမြွေတကောင် တွေ့ရှိ
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကလေးငယ်တဦးရဲ့ နေ့လယ်စာ ထမင်းဘူးထဲက အဆိပ်ပြင်းမြွေတကောင်ကို မိခင်ဖြစ်သူက တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဘီဘီစီသတင်းတပုဒ်မှာ ဒီကနေ့ ဖော်ပြပါတယ်။ အဲဒီမြွေဟာ မြွေပေါက်အရွယ်သာဖြစ်ပြီး နေ့လယ်စာ ထမင်းဘူးအဖုံး မြောင်းတွင်းမှာ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မြွေဖမ်းသမား ရော်လီ ဘာရဲလ်က ပြောပါတယ်။ …
အနောက်နိုင်ငံများကိုလည်ပတ်ရန် ကင်ဂျုံအန်းနှင့် ကင်ဂျုံအီတို့ ဘရာဇီးပတ်စ်ပို့အတု အသုံးပြုခဲ့
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းနဲ့ သူ့ရဲ့ဖခင် ကင်ဂျံုအီတို့ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေကို လည်ပတ်ဖို့ ဘရာဇီးပတ်စ်ပို့အတု အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က အနောက်နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက် ဗီဇာလျှောက်ထားရာမှာ ဘရာဇီးပတ်စ်ပို့အတုတွေကို သုံးစွဲခဲ့တဲ့အကြောင်း အနောက်ဥရောပ လုံခြံုရေး သတင်းအရင်းအမြစ် ငါးခုက …